लेडी हिरोको लस्कर « Kamana
लेडी हिरोको लस्कर
विदुर गिरी । चक्लेटी नायकको पछिपछि लागेर रुखमुनि नाच्नु र ऊसँग रोमान्स गर्नु। अर्थात् हिरोलाई हिरो बनाउन उसको वरिपरि घुमेर सघाउनु। नेपाली सिनेमामा यस्तैमा सीमित देखिँदै आएको छ नायिकाको काम।
नेपाली र बलिउड फिल्म यस्तै सूत्रमा बन्ने गर्छन्। हलिउडदेखि कोरियन फिल्मसम्म नदेखिएका नायिकाको भूमिका नेपाली र बलिउड फिल्ममा यस्तै हुने गर्दछ। अर्थात् नायिकालाई पुरुष पात्रको वरपर घुम्ने चरित्रका रुपमा उभ्याउने गरिन्छ। हिरोलाई बलियो बनाउन एउटा जोडी त चाहियो नि भन्ने शैलीमा नायिकालाई सीमित गर्ने गरिन्छ। कतिपय नायिकालाई आफूले गर्दै आएको यस्तो भूमिकाप्रति आफैलाई चित्त बुझेको छैन। र पनि उनीहरु यस्तै भूमिकामा सीमित हुन बाध्य छन्। यसो भन्दैमा यो फ्रेमबाहिर आएर काम गर्ने नायिका तथा अभिनेत्रीको पूर्णतया कमी भने छैन। अभिनेत्री सुभद्रा अधिकारीबाट शुरु भएको लेडी हिरोको अवधारणालाई बोकेर अघि बढ्ने नायिकाहरुको हिजोआज लस्कर लाग्न थालेको छ।
यति विघ्न नायिकाहरु भएको नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा किन औंलामा गन्न सकिने नायिकाहरु मात्र लेडी हिरोको रुपमा अगाडि आउन सफल भए। प्रायः नायिकाहरुको जवाफ हुने गरेको छ यस्तो प्रकारको फिल्मकै अभाव छ। हिरोइनलाई हिरोको वरिपरि घुम्ने पात्रका रुपमा मात्र खडा गरिन्छ।
अभिनेत्री सुभद्रा अधिकारी नै ती अभिनेत्री हुन्, जसले पहिलोपटक नेपाली फिल्ममा लेडी हिरो कस्तो हुन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले तुलसी घिमिरेद्वारा निर्देशित फिल्म चिनोमा खलपात्रसँग बदला लिने साहसी लेडी हिरोको छाप बनाएकी थिइन्। सुभद्राको करिअर अभिनेता सुनील थापालाई राते काइँलाका रुपमा चिनाउने फिल्म चिनोमा लेडी हिरोको भूमिकामा सशक्त अभिनय गरेपछि अझ उकालो लागेको थियो। चिनोका निर्देशक तुलसी घिमिरेले शुरुमा सुभद्राले गरेको भूमिकामा भारतीय नायिका माला सिन्हालाई खेलाउने सोच बनाएका थिए। मालाले समय दिन नसक्ने भएपछि घिमिरेले सुभद्रालाई लिएका थिए।
सुभद्राले त्यो फिल्मबाट डबिङका क्रममै भारतीय युवाहरुबाट मुम्बईमा यति प्रशंसा पाएकी थिइन् कि उनीहरूले सुभद्राको पाउ परेर भनेका थिए ‘आप तो महान् कलाकार है, हम आपका अभिनयकला देखकर बहुत प्रभावित हुए।’ पछि चिनो हेरेर मालाले निर्देशक घिमिरेलाई भनेकी थिइन्– ‘तुलसीजी, मैले ठूलो गल्ती गरेछु। यस्तो राम्रो रोलमा पनि मैले अभिनय गर्न सकिनँ, मलाई ठूलो पछुतो भइरहेको छ। तर जसले यो भूमिका निभाइन्, ती उत्कृष्ट अभिनेत्री हुन्।’ नभन्दै सुभद्राका साथमा उनका सहकलाकारको बेजोड अभिनयका कारण फिल्म सुपरहिट हुन पुगेको थियो। उनले त्यो फिल्ममा सुनील थापासँग बदला लिने साहसी नारीको भूमिका निर्वाह गर्दै लेडी हिरोको गहिरो छाप बनाएकी थिइन्।
सुभद्रा अधिकारीले अगाडि सारेको लेडी हिरोको छापलाई पछ्याउने नायिकाहरु थुप्रै देखिन थालेका छन्। नायिका रेखा थापा यसको अग्रपंक्तिमा आउँछिन्। निर्माता छवि ओझासँग लिभिङ टुगेदर रिलेसनमा बसेर उनीसँगै फिल्म निर्माण गर्दै आएदेखि अहिले एक्लै फिल्म निर्माण गर्दासम्म पनि रेखाले हिम्मतवालीदेखि मालिकासम्म आफूलाई लेडी हिरोका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएकी छिन्। नीता ढुंगानाले पञ्चायतमा यस किसिमको प्रतिभा प्रदर्शन गरेर वाहवाही मात्र पाइनन्, देशदेखि विदेशसम्मका अवार्ड चुमिन्।
हिरोलाई बलियो बनाउन एउटा जोडी त चाहियो नि भन्ने शैलीमा नायिकाहरुलाई सीमित गर्ने गरिन्छ। कतिपय नायिकालाई आफूले गर्दै आएको यस्तो भूमिकाप्रति आफैलाई चित्त बुझेको छैन। र पनि उनीहरु यस्तै भूमिकामा सीमित हुन बाध्य छन्।
पञ्चायतमा त्यस किसिमको भूमिका निर्वाह गरेर प्रशंसा पाएपछि नीता हिजोआज सकेसम्म सिंगो फिल्मको कथा आपैmले बोक्ने लेडी हिरोको भूमिकाका लागि लालायित छिन्। बेनिषा हमालले ब्लाइन्ड रक्समा दृष्टिविहीन युवतीको चरित्रलाई पर्दामा उतारेर आफूलाई लेडी हिरोका रुपमा उभ्याइन्। उनी पनि हिजोआज सामान्यभन्दा आफ्नै काँधमा फिल्म बोक्ने कथा कुरिरहेकी छिन्। ‘एउटा फिल्ममा च्यालेन्जिङ रोल गरेपछि फेरि फेरि पनि त्यस्तै काम गरुँ भन्ने लाग्दोरहेछ’, बेनिषा भन्छिन्– ‘त्यसैले पावर फिल्मको पर्खाइमा अफर आएका केही फिल्ममा काम गरिनँ।’
कृष्ण धारावासीको लोकप्रिय कृति झोलामाथि झोलाकै नाममा फिल्म निर्माण भयो। त्यसको मुख्य भूमिकामा गरिमा पन्तले अभिनय गरेर उनी पनि लेडी हिरोका रुपमा अगाडि आइन्। त्यसमा गरेको कामबाट उनले चौतफी प्रशंसासमेत पाइन्। उनले त्यो भूमिकाबाट यति धेरै प्रशंसा पाइन् कि त्यसपछि उनलाई पहिले अभिनय गर्दै आएजस्तो सामान्य भूमिका गर्ने मनै भएन। फिल्मको प्राविधिकस्तर जस्तो भए पनि गरिमाले गरेको कामका कारण सिंगो फिल्मले प्रशंसासमेत पायो। स्वस्तिमा खड्का यस्तै अर्की लेडी हिरो हुन्। जसले बुलबुल नामक फिल्ममा टेम्पो महिला ड्राइभरको भूमिका गरेर आफूभित्रको प्रतिभा प्रदर्शन गरिन्। केही समय टेम्पो चलाउन सिकेर गरेको उनको कामलाई दर्शकले त मन पराए नै। देशदेखि विदेशसम्मका अवार्ड पनि दिलायो। बुलबुलमा गरेको कामपछि उनको व्यस्तता पनि बढ्यो। तर स्वस्तिमा भने फेरि पनि फरक ढंगको भूमिकाका लागि आतुर छिन्।
नायिका पूजा शर्माले धेरैजसो होम प्रोडक्सनको फिल्ममा काम गरेकी छिन्। त्यसमा पनि परम्परागतरुपमा चल्दै आएको हिरोको पछि लाग्ने र उसैसँग नाचगान गर्ने भूमिकामै उनी बढी देखिइन्। यसपटक होम प्रोडक्सन बाहिरको फिल्म पोई पर्‍यो कालेमा उनी मुख्य भूमिकामा छिन्। कामनाको यो अंक बजारमा आउँदासम्म उनको फिल्म पोई पर्‍यो काले पनि रिलिज भइसकेको हुनेछ। यसमा उनले कस्तो काम गरेकी छिन्, त्यो कामनाको यो अंक हात पर्दासम्म पाठक दर्शकले आफैले मूल्यांकन गर्न सक्नुुहुनेछ। पूजाको दाबीमा भने उनले पहिलोपटक यो फिल्ममार्फत सिंगो फिल्मलाई आफ्नो काँधमा बोकेकी छिन्। फिल्ममा उनी लभर ब्वाइदेखि गृहिणीसम्मको भूमिकामा छिन्। २ प्रेमी र २ पतिको एक प्रेमिका र श्रीमतीको भूमिका उनको छ। ‘त्यस कारण यो अहिलेसम्म मैले गरेको रोलभन्दा एकदमै भिन्न छ। मैले आफैले बनाएको फिल्ममा पनि यस्तो बोल्ड भूमिका गरेको छैन। यो त मेरा लागि चिठ्ठै परेको हो’, पूजा भन्छिन्– ‘यो फिल्मले मेरो करियरलाई फाइदा हुनेछ। दर्शकले फिल्ममा मेरो रोल हेरेर मलाई नै माया गर्नुहुन्छ। मेरो छुच्ची चरित्र देखेर मलाई नै गाली गर्नुहुन्छ। फिल्म मेरै वरिपरि घुम्ने गर्छ।’
चर्चा गरिएअनुसार यो त्यही फिल्म हो, जसमा पूजाले अहिलेसम्म नेपाली नायिकाहरुले लिँदै आएकोमध्ये सर्वाधिक धेरै पारिश्रमिक लिएकी छिन्। चर्चा सत्य हो भने पूजाले यो फिल्मबाट २० लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएकी छिन्। बताइएअनुसार उनले केही नगद र बाँकी शेयरबापत २० लाख रुपियाँ पारिश्रमिक यो फिल्मबाट लिएकी छिन्। ‘यो मेरो मेहनतअनुसारको पारिश्रमिक हो। पारिश्रमिकअनुसारको मेहनत मैले फिल्ममा गरेको छु। फिल्म हेरेपछि सबैले यो महसुस गर्नुहुनेछ।’ –पूजा भन्छिन्। नेपाली फिल्मको बजारको तुलनामा यो रकम धेरै भएको भन्नेहरुलाई पूजाको जवाफ छ– ‘पारिश्रमिक दिने निर्मातालाई यसको परवाह छैन भने अरुलाई किन आपत्ति हुनु?’ फिल्म राजीव गुरुङको निर्माणमा बनेको हो।
यी भए पर्दामा लेडी हिरोका रुपमा छाएका नायिकाहरु। तर यति धेरै कलाकार, यति विघ्न नायिकाहरु भएको नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा किन औंलामा गन्न सकिने नायिकाहरु मात्र लेडी हिरोका रुपमा अगाडि आउन सफल भए? प्रायः नायिकाहरुको जवाफ हुने गरेको छ यस्तो प्रकारको फिल्मकै अभाव छ। हिरोइनलाई हिरोको वरिपरि घुम्ने पात्रका रुपमा मात्र खडा गरिन्छ। स्क्रिप्ट त्यसअनुसारको बन्ने हो भने नेपाली फिल्म क्षेत्रमा लेडी हिरोको लस्कर अझ बढ्नेछ।
सञ्चारकर्मी संगीता श्रेष्ठको डेब्यु निर्देशनमा बनेको फिल्म कथा काठमाडौंको केही कथामध्ये एउटा कथामा नायिका प्रियंका कार्कीले गरेको अभिनय मात्रै हेर्ने हो भने पनि नायिकाहरुको यो भनाइमा सत्यता भेटिन्छ। फिल्ममा प्रियंकाले परिस्थितिजन्य कारण कुलतमा फस्न पुगेकी एउटी युवतीको भूमिकामा यसरी अभिनय गरेकी छिन् कि उनलाई कुनै निर्माता निर्देशकले लेडी हिरोको रुपमा अगाडि सारे त्यो फिल्मले ठुलो सफलता हात पार्न सक्छ। फिल्म कथा काठमाडौंमात्र नभई प्रियंकाले विभिन्न फिल्ममा जसरी भरभराउँदी युवतीदेखि आमा र गृहिणीसम्मको भूमिकामा लोभलाग्दो अभिनय गर्दै आएकी छिन्।
त्यसबाट उनी साहसी महिलाको जस्तोसुकै भूमिकामा खरो उत्रन सक्छिन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। पण्डित बाजेको लौरीमा वदिनी महिलाको भूमिकामा सन्ध्या केसीले पस्केको अभिनय क्षमताले उनी पनि यस्ता भूमिकाको हकदार लाग्छिन्। प्रियंका, सन्ध्या केबल उदाहरणमात्र हुन्। उनीजस्तो कुशल र सशक्त अभिनय क्षमता बोकेका नायिकाहरु नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा थुप्रै छन्। केकी अधिकारी, नम्रता श्रेष्ठ, ऋचा शर्मा, वर्षा राउत, मेनुका प्रधान, सुरक्षा पन्तजस्ता एक सय एक नायिकाहरु नेपाली चलचित्र क्षेत्रले पाएको छ लेडी हिरोका लागि। तर त्यसअनुसारको कथावस्तुको कल्पना नै पो हुन नसकेको हो कि? या त्यस प्रकारको कथावस्तुमा फिल्म निर्माण गर्ने आँट पो नभएको हो कि?
एकै प्रकारका कथावस्तु अनि उस्तै प्रकारका पात्र फिल्मको पर्दामा दोहोरिइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो आँट गर्नु उपयुक्त कदम हुन सक्छ। हिरोको पछिपछि लाग्ने हिराइनको कथा, हिरोका कारण रुमल्लिएकी हिरोइनको व्यथा हेरेर वाक्क भइसकेका दर्शकका लागि हिरोइनको साहसिक यात्रा, हिरोइनको अदम्य साहस, समाज सुधारका लागि हिरोइनले चाल्ने कदम, राजनीति, प्रशासन, अपराधको कथामा हिरोइनका दबदबा पक्कै पनि दर्शकलाई रोमाञ्चित तुल्याउने र आकर्षित गर्ने खुराक हुन सक्ला कि?